संगीतसँगै व्यवसायमा रम्दै कृष्ण भण्डारी : भन्छन्- दोहोरीमा मौलिकता कम, बुस्ट बढी ! - Parichaya.com
संगीतसँगै व्यवसायमा रम्दै कृष्ण भण्डारी : भन्छन्- दोहोरीमा मौलिकता कम, बुस्ट बढी !
By परिचय	 On ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:३३ 0
पोखरा दोस्रो ठूलो सांगीतिक शहर । संगीतलाई नै मुख्य पेशा बनाएर यहाँ निरन्तर कर्म गर्नेहरूको कमी छैन । गाउँदेखि केही गर्छु भन्ने उदेश्य राखेर शहर पस्नेका लागि पोखरा राम्रो गन्तव्यका रूपमा साबित भएको छ । बाहिरी जिल्लाका धेरै कलाकार पोखराबाटै स्थापित भएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । लोकदोहोरी होस् या आधुनिक पप । पोखरालाई संस्कृतिको सवालमा हेर्ने नजरियामा नै फरकपन पाइन्छ । पोखराको लोकगीतले विश्वबजारमा स्थान पाएको आभाष हुन्छ । यहाँको माटोमा नै सुरको सुगन्ध भेट्न सकिन्छ । कृष्ण भण्डारी एक यस्तै सुरका साधक हुन् । उसो त उनलाई नयाँ पुस्ताले त्यति चिन्दैनन् । तर ०५९/६० सालदेखिनै उनी संगीतमा संघर्षरत छन् ।
विसं २०६० सालमा चापाकोट-७ नौबिसे सिद्धबराह माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपश्चात ०६१ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना भएपछि उनको सांगीतिक क्षेत्रमा लगाव बढ्दै गयो । साबिकको भदौरे तमागी-५ कास्की हालको पोखरा महानगर २३ मा जन्मेका भण्डारी सानैमा चकचके स्वभावका थिए । बुबा हिमलाल भण्डारी र आमा भीमकुमारी भण्डारीको कान्छा सुपुत्रको रूपमा ०४३ साल मंसिर ४ गते जन्मेका भण्डारी सानैदेखि गीतसंगीतमा रुची राख्थे । तत्कालीन समयमा विद्यालयमा भएका शुक्रबारका अतिरिक्त कार्यक्रममा उनको सांगीतिक प्रस्तुति हुने गर्थ्यो ।
२०६० सालमा नै उनले दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । तत्कालीन समयमा रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट लोकदोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले देउराली कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे । उक्त कार्यक्रम सुनेर लोकदोहोरी क्षेत्रमा लाग्ने धेरै कलाकार छन् । भण्डारी समेत सोही कार्यक्रम सुनेर गीतसंगीतमा प्रवेश गरे । गीत सुनेर सिक्ने वातावरण उनलाई मिल्यो । औपचारिक सांगीतिक यात्रा २०६० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपश्चात ०६१ सालमा भण्डारी पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना भए । ०६१ सालबाट नै दोहोरी गाएर उनको औपचारिक सांगीतिक यात्रा शुरूआत भयो ।
०६३/०६४ सालमा ‘अन्तिम चिठी लेख्न नपरोस्, तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेको सपनामा पनि देख्न नपरोस्’ लोकदोहोरी गीत भण्डारीले आफ्नै सिर्जनामा रेकर्ड गराए । उनलाई आवाजमा भने राजु परियार र विष्णु माझीले साथ दिएका थिए । त्यतिबेला क्यासेटको जमना थियो । कृष्ण देवकोटाको ‘माछापुच्छ्रे म्युजिक सेन्टर’ ले बजारीकरणको जिम्मा लिएको थियो । गीतले सामान्य सफलता कमाएको भण्डारी बताउँछन् ।
काठमाडौंको नयाँबजारमा एउटा स्टुडियो थियो । डीबी गुरुङ रेकर्डिस्ट थिए । गुरुङले आफूलाई लोकदोहोरीको सबिन राईको संज्ञा दिँदा भण्डारी खुशीले गदगद हुन्थे । भण्डारीले २०६६/०६७ मा ‘को नै छ र अरू, भेट्न आउ न एकचोटी मुख हेर्छु नबोलौला बरू’ गीत सार्वजनिक गरे । आफ्नै सिर्जनामा उनले उक्त गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा आवाजमा रामजी खाँडको समेत सहयोग भण्डारीलाई मिल्यो । कृष्ण भण्डारीले एक दर्जन भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएका छन् ।
०६३ सालमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको दोहोरी कार्यक्रममा १६ जिल्लाका ३२ जनाले सहभागिता जनाउँदा प्रथम भएका भण्डारीको बीचमा गीतसंगीतको यात्रा रोकियो । कारण थियो- उनको पढाई । अध्ययन अध्यापनमा लाग्दा सांगीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन भण्डारीलाई समस्या भयो । समय व्यवस्थापन गर्न उनले भ्याएनन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सांस्कृतिक विभागबाट राजनीति क्षेत्रमा पाइला टेकेका भण्डारीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सांस्कृतिक समितिमा रहेर समेत काम गरे । जसमा होम बहादुर नेपाली, मनकुमार श्रेष्ठ लगायतको सक्रियता थियो । भण्डारी जनसांस्कृतिक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका छन् । उनी जनसंगीत मञ्चका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।
तत्कालीन समयमा कास्कीमा चार वटा निवार्चन क्षेत्र थियो । क्षेत्र नं ४ को क्षेत्रीय अधिवेशनमा सबै भन्दा बढी मत ल्याएर ‘म्यान अफ दि इलेक्सन’ को रूपमा निर्वाचित भएका थिए भण्डारी । हिमाल कलेज पोखराका फाउण्डर भण्डारी पछिल्लो समय युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको एमडीआरटी एचीभर, सिनीयर एजेन्सी मेनेजरका रूपमा कार्यरत छन् । उनी लगायत लाइन्स डिपार्टमेन्ट अफिसर हुन् । पोखराका राम्रा ट्रेनरका रूपमा समेत भण्डारी स्थापित भइसकेका छन् । आफैंले सिर्जना गरेका गीतहरू मध्ये लोकदोहोरी गायक राजन कार्कीसँग सहकार्य गरेको ‘रमाइलो राम्दीमा तिमी आउ है, म आउन पाउदिनँ’, ‘रातो सारी ढल्कायौ तीजमा साउनमा हरियो पहिरन, हेरेर फसायौ सानु मन लाग्छ तिम्रै छेउ भइरहन’, ‘माछीलाई खुलीको लेउ प्यारो, मलाई भने सानोको छेउ प्यारो (सालैजो)’ गीतले उनको पहिचान बढायो । गीतसंगीतमै लागेर भविष्य बनाउँछु भन्ने सोचमा भण्डारी छैनन् ।
आर्थिक आम्दानीका लागि उनले व्यवसायसँगै जागिरको बाटोलाई अंगालिसकेका छन् । यति भनिरहँदा गीतसंगीत रेकर्ड नगर्ने भने होइन । सिर्जनाको संग्रहका लागि भए पनि उनी रेकर्डिङलाई समेत साथै लैजाने योजनामा छन् ।
‘लोकगीतमा मौलिकता हरायो’
भण्डारी लोकगीतमा मौलिकता हराएको बताउँछन् । अहिलेका गीतहरू लोक गीत नभएर मोर्डन गीत भएको उनको तर्क छ ।
अङ्ग्रेजी शब्द मिसाएर सार्वजनिक गरिएका गीतलाई पूर्णतया लोकगीत भन्न नमिल्ने उनको बुझाई छ । पछिल्लो समय केही कलाकारका कारण लोकदोहोरी गीतको पहिचान हराउँदै गएको महसूस भण्डारीले गरेका छन् । भल्गर शब्दको प्रयोगले सिङ्गो दोहोरी क्षेत्र नै बदनाम हुनुपरेको भण्डारी बताउँछन् ।
संगीतमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
भण्डारी सांगीतिक क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पाउँछन् । यूट्युब ट्रेण्डिङमा पर्नका लागि लाखौं खर्च गरेर भिडियो बनाउने र फेरि लाखौं खर्च गरेर बुस्ट गर्ने सिस्टमले संगीत बजारलाई बिगारेको उनी बताउँछन् । पैसा हुनेहरूका लागि चर्चा कमाउन हालको समयमा सजिलो भएको उनको बुझाई छ । कलाको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्दा सांगीतिक क्षेत्रमा धमिरा लागेको भण्डारी पाउँछन् ।
‘संगीतको साधकको कोही बाधक हुँदैन’
भण्डारीले संगीतको साधकको कोही बाधक नहुने बताएका छन् । सफल वा असफल हुने आफ्नो हातमा रहेको नयाँलाई उनको सुझाव छ । संगीतमा अध्ययन गरेर आउन भण्डारीले आग्रह गरेका छन् । एउटा शिक्षकले २० औं वर्ष गरेर शिक्षण पेशामा लाग्छ भने गायकले समेत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको उनको भनाई छ । क्षणिक स्वार्थले संगीतमा आउनेको भविष्य नभएको भण्डारी बताउँछन् । पोखरा संस्कृतिको राजधानी हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र लोकदोहोरी क्षेत्रको आधारस्थल हो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा भएकाले यहाँ थुप्रै जिल्लाको कलाकर्मीहरू संघर्षशील छन् । प्रस्तुतिका हिसाबमा महोत्सवमा आफूलाई सबल बनाएका र पोखरामै बसेर संगीतकर्म गरिरहेका कलाकारहरू राजधानीका कलाकारको नजरमा समेत पर्ने गरेका छन् ।
पोखरालाई नै कर्मथलो बनाएर काम गरेता पनि मोफसलमा छु भन्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । दोहोरी साँझ कलाकारका लागि जिउने आधार भएको उनको तर्क छ । भण्डारी पोखराको सांगीतिक क्षेत्रको सुधारका लागि काठमाडौं कै क्वालिटी दिने खालको रेकर्डिङ स्टुडियोको आवश्यकता रहेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार पोखरामा राम्रा बाद्यबाद्यकको समेत अभाव छ । भएका बाद्यबाद्यकहरूले पनि आफूलाई निखार्न सके पोखराको सांगीतिक क्षेत्रले गति पाउने विश्वास उनको छ ।
बैतडीमा जीप दुर्घटना : ५ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
३० भन्दा बढी कलाकार अभिनित राष्ट्रिय गीत ‘त्यही सच्चा नेपाली’ सार्वजनिक
कृष्णको ‘दीप भई बलिरहुँ’ सार्वजनिक
‘जनकपुरे रेल’मा सरोज र आश्माको नृत्य
किरणको ‘फेवा’मा छुल्ठिमको अभिनय